Swiss ụgbọ oloko bụ ndị kasị mma na Europe dị ka Boston Consulting Group. Na mbụ, Switzerland-enweta elu ratings n'agbanyeghị idobe quality. The Swiss enweta a 7.2 n'ozuzu fim nke 10. ebe Denmark, Finland, na Germany niile enweta a 6+ fim. N'etiti ndị ratings, ọ dị mkpa karịsịa ịkọ na Bulgaria nwetara ọkwa dị ala 1.9. Switzerland-enweta na ya elu fim n'ihi na ọ gbatara full akara na ike nke eji.
Na mgbakwunye inweta ọkwa dị elu, A na-ahụkwa ụgbọ oloko Switzerland ka ọ bụrụ ezigbo ego. The index ratings ndị dị ka ndị;
Firstly, e nwere ọtụtụ ihe na-eme ka Swiss ụgbọ okporo ígwè njem kasị mma na Europe. Ọ bụghị nanị na Swiss ụgbọ oloko inye ndị kasị mma pụrụ ịdabere na n'oge na-Europe kamakwa ha na-atụle ga- oké mma na ezi mma ọrụ. The Switzerland bụ ndị kasị Ugboro njem njem na Europe na n'elu 10,000 ụgbọ oloko na-agba ọsọ kwa na 3000 km okporo ígwè netwọk. The Swiss okporo ígwè netwọk nwere kasị elu ikike itinye n'ọrụ na Europe.
E nwere ihe mere Swiss ụgbọ oloko e họọrọ nọmba 1 ebe 2012. Mba na obere okporo ígwè netwọk (n'okpuru 6,000 km) niile hụrụ ha ratings mma n'oge a. Nke a gụnyere Switzerland, Denmark, Finland, Norway, mba netherland, na Luxembourg. Mba ndị a na-enye elu n'oge, ụgbọ okporo ígwè dị elu ma na-enye ọnụ ala kwa kilomita maka ọrụ ha. Kwesiri dị mkpa, mba ndị a ụgbọ oloko nwere ole na ole ihe mberede na-anwụ nke mma ha n'ozuzu nchekwa akara.
Best ebe ileta na Switzerland na Switzerland ụgbọ oloko
E nwere ọtụtụ ndị mara mma na ebe ileta na Switzerland n'agbanyeghị ya obere size. Alps na glaciers bụ ihe kachasị adọrọ mmasị mana ndị njem na-enwekwa ọ theụ ochie castles, doro anya turquoise ọdọ mmiri, na bucolic obodo. Ọ bụla nke afọ ị pụrụ ịnụ ụtọ hiking, skeeti akpụrụ mmiri, ememme na- carnivals na Switzerland. Ọzọkwa, enwere oke mpụ na Switzerland nke na-eme ka ọ bụrụ ebe nchekwa maka ndị njem. Ga-ahụ ebe dị na Switzerland gụnyere Matterhorn, Zermatt nke bu ugwu kacha ese foto n’elu uwa. dokwara, Chateau de Chillon, Montreux bụ a ga-ahụ maka njem nleta. Oge ochie a mmiri ebe e wusiri ike nke ndị mejupụtara 25 ụlọ na atọ n'ogige bụ otu n'ime ndị kasị gara mere ihe akụkọ ụlọ na ụwa.
Na ngwụcha, e nwere ọtụtụ ihe mere ka a gaa Swiss ụgbọ okporo. N'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Switzerland na-eleghị anya ndị kasị mara mma n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Europe. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihunanya ezumike ma ọ bụ breathtaking àkwà mmiri, Switzerland bụ ebe ọ ga-. iri 3 nkeji ugbu a ka akwụkwọ tiketi maka a Swiss ụgbọ okporo ígwè na anyị mfe na-eji ụgbọ okporo ígwè saịtị. Tiketi nwere ike zụrụ iji kaadị akwụmụgwọ, na ọtụtụ ọzọ ịkwụ ụgwọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fswiss-trains-ranked-best-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)